Gudoomiye Ku xigeenka Gobalka Banaadir Cali yare iyo Safiirka Uganda oo Ku Kulmay Muqdisho (Sawiro)
Home Wararka Maanta Gudoomiye Ku xigeenka Gobalka Banaadir Cali yare iyo Safiirka Uganda oo Ku...
Guddoomiye Ku Xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Md. Cali Cabdi Wardheere ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabiley Safiirka dowladda Ugandha Ambassador Mugisha, waxa ayna labada masuul ka wada hadlay adkeynta Xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ugandha.
Guddoomiye Cali Yare Cali oo u mahadceliyey safiirka ayaa ka codsaday in la so celiyo tababardii ay dowladda Ugandha siin jirtey shqaalaha dowladda hoose iyo Guddoomiyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir.
Waxa kale oo uu Guddoomiye Cali Yare safiirka ka codsaday in la fududeeyo helitaan dal ku galka ee VISAHA maadaama ay Soomalidu aad u safarto.
Gebagebadii Ambassador Mugisha waxa uu balan qaaday in uu wax badan ka qaban doono codsiga Maamulka Gobolka Banaadir, waxaana lagu balamay in la joogteeyo kulamada u dhexeeya Safaaradda iyo Gobolka Banaadir.
Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah Agasimayaasha Maamulka Gobolka Banaadir, gaar ahaan Agaasimayaasha qeybta Amniga iyo Siyaasadda.
Previous articleWeriye Lagu xiray Galgaduud oo Goor dhaw Xabsiga Laga sii daayay
Next articleDowladda Kenya oo sheegtay inay dib u furayso Safaarada ay ku leedahay Somaliya (Akhriso)